‘मेरो बुढीले अर्कैको गर्भ बोकेकी छ, म के गरौँ’ भन्दै विक्रम मिडियामा, प्रहरीले पनि दिएन न्याय [भिडियो सहित] – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/‘मेरो बुढीले अर्कैको गर्भ बोकेकी छ, म के गरौँ’ भन्दै विक्रम मिडियामा, प्रहरीले पनि दिएन न्याय [भिडियो सहित]
काठमाडौ । समाजमा अनौठो घ’टना हुने गरेका छन् । आफ्नो श्रीमती गर्भवती भएपछि उनका श्रीमान म अन्यायमा परेँ भन्दै मिडियो बोलाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत गएका उनी असारमा घर आउँदा आफ्नो श्रीमती गर्भवती भएको देखेपछि उनी अचम्म परेका थिए । दागंको हापुरमा रहेकी ति महिलाको गाउँकै एक युवाको गर्भ रहेपछि उनका श्रीमान म अन्यायमा परेँ भन्दै मिडिया बोलाएका हुन् ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
मंसिरमा रोजगारीका लागि भारत गएका उनी असारमा आउँदा गर्भवती भएको श्रीमती देखेपछि उनी अचम्म परेका हुन् । श्रीमानले श्रमतीको ठुलो पेट देखेपछि के हो यो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यतीबेला अर्कैको गर्भ हो भनेकी श्रीमतीले प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि भने श्रीमानकै हो भनिदिइन् । श्रीमानले म घरमा थिइन, यो सन्तान मेरो होइन भन्दा प्रहरीले प्रमाण मागे ।
उनका श्रीमान भन्छन्, ‘म भारत गएको आएको टिकट मागे, भारतमा जहाँ काम गरेको हो त्यहाँको हाजिरी लिएर आइज भने । मलाई यस्तो होला भन्ने के थाहा ? अब यतिबेला प्रमाण कसरी ल्याउने ?’ प्रहरीलाई प्रमाण दिन नसकेका कारण उनी अहिले अर्कैको गर्भ बोकेकी श्रीमतीसंगै बसेका छन् ।
श्रीमतीले मिडिया सामु पनि आफ्नो पेटमा भएको बच्चा आफ्ना श्रीमानको नभएको बताएकी छन् । आफुलाई गर्भवती बनाउने युवाले ध म्की दिएका कारण प्रहरी कार्यालयमा झु’टो बोलेको उनको भनाई छ । ति युवाले पैसा समेत दिने भनेर आश्वासन दिएका थिए । तर पैसा समेत नदिएको उनको भनाई छ । प्रहरी कार्यालयमा श्रीमानले प्रमाण जुटाउन नसकेपछि श्रीमती र यो बच्चालाई म आफै पाल्छु भनेर कागज बनाएर घर फर्किएको बताएका छन् । यता श्रीमानले भने मलाई अब त्यो केटाको पैसा पनि चाहिन्न यो श्रीमती पनि चाहिन्न भनेका छन् ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
४७ सय मिटरको उचाइबाट चिनियाँ सेनाले गोलीबा’रुद चलायो, सीमातर्फ सयौँ ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडीको लाइन ! (हेर्नुहोस भिडियो)
भर्खरै बसपार्क घ’टनाले लियो ठुलो रुप ! पुलिसकै अगाडि २ पक्ष बीच हात हाला_हाल, पुसिललाई नै तनाब (हेर्नुहोस भिडियो)
सप्तकोसी पछि गण्डक ब्यारेजमा पनि डे’न्जर बाढी – बिहार र उत्तर प्रदेश पुरै डुब्यो! नेपालसङ्ग गुहार (हेर्नुहोस भिडियो)
श्रीमान म रेको ६ महिना नहुदै श्रीमतीको टाउको थि, चेर बि भत्स ह त्या, करोडौको लागि ससुरा नन्दले यस्तो कु – कर्म गरेको खुलासा हेर्नुहोस भिडियोमा घटनाको नालीबेली